Home Wararka Gudaha Lamaane ka tirsan DAACISH oo maanta lagu xukumay Muqdisho
Lamaane ka tirsan DAACISH oo maanta lagu xukumay Muqdisho
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku ridday lamaane is qaba oo lagu helay dembi ah inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish, gaar ahaan faraceeda Soomaaliya.
Lamaanaha oo lagu kala magacaabo Dayib Macalim Maxamed Xasan iyo Xaliimo Cabdi Mursal Ibraahim ayaa la sheegay inay la baxeen magacyo been abuur ah oo loo yaqiinay, sida Mustaf iyo Xaawo, waxaana lasoo xiray bishii March ee sanadkan 2022-ka, iyada oo lagu qabtay agabkii qaraxyada ay u isticmaalayeen iyo sidoo kale qarax diyaarsan.
Dayib ayaa maxkamaddu sheegtay inuu kooxda u qaabilsanaa sameynta qaraxyada, halka Xaliimo ay qaabilsaneyn keydinta hubka iyo soo dhaweynta xubnaha kooxda Daacish.
Intaas kadib xafiiska xeer ilaalinta ayaa baaris dheer kadib maxkamadda ciidamada weydiistay in la maxkamadeeyo billowgii June, isla xilligaas ayay maxkamadda aqbashay dhegeysiga dacwadda laba eedeysane.
Xeer Ilaalinta ayaa sidoo kale maxkamadda ka hor caddeeyey in labada eedeysane ay is qabeen, laakiin ay isku guursadeen magacyada Mustaf iyo Xaawo, waxayna maxkamadda ka hor sheegeen labadooda in sarkaalkii xukumayay ee kooxda Daacish uu isku doonay
Dhankooda qareennada difaacayey eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto, loona fiiriyo qodobada dembiga fududeeyo.
Dhowr fadhi kadib maxkamadda ayaa maanta ku wada xukuntay lamaanahan min 15-sano oo xabsi ah, sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay Garsoore Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.
Dayib Macalim iyo Xaliimo Cabdi ayaa heysta fursad kale oo ay rafcaan uga qaadan karaan xukunka lagu riday, haddii aysan ku qanacsaneyn, sida ay shaacisay maxkamadda.
Previous articleDEG DEG: Wasiirka wasaaradda Dib-u-Heshiisiinta Hirshabelle Eng Cabdikariim Cali Nuur oo is casilay kaddib, Isbadal balaran oo lagu sameeyn rabo Golaha Wasiirada iyo Heer Gobol & Dagmo
Next articleMareykanka oo ka jawaabay hadal kasoo yeeray Al-Shabaab
Magaalada Baladweyne oo Wajahayso Amni Darro halkii ugu Xumeed, iyo waliba...
Xog: Cabsi laga qabo inay Golaha Wasiirada Xamza ku soo dhex...